Golden MM News for Android
About Golden MM News
★"Golden MM News App" is can be read easily daily news for shwe myanmar people.
★"Golden MM News App" သည် နေ့စဉ်သတင်းများ ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၊ အားကစား-ဘောလုံးဆိုင်ရာနဲ့ အခြားသော သတင်းများကို ဖုန်းထဲမှ အလွယ်တကူ internet connection အနည်းယေ် ရှိခြင်းဖြင့် News Feed များ ဦးစွာ ရယူပြီး Online/Offline ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် နေရာဒေသ အသီးသီးမှာ ရှိကြတဲ့ ရွှေမြန်မာများ အတွက် အဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊
★ App ထဲမှာ ပါရှိတဲ့ သတင်း မီဒီယာ များနဲ့ သက်ဆိုင်သူများကို Credit ပေးပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Download and install Golden MM News version 1.0 on your Android device!
Android package: com.Gmmnews.apk, download Golden MM News.apk
More downloads Golden MM News reached 10 000 - 50 000 downloads Nov 2, 2016
What are users saying about Golden MM News
My favourate choice app.